Kolonel Gammachuu Ayyaanaa fi isa waliin jiran akka gadi lakkifaman Manni Murtii ajajeera! – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooKolonel Gammachuu Ayyaanaa fi isa waliin jiran akka gadi lakkifaman Manni Murtii ajajeera!
Duris yakkama miti ammas Haqa ati qabdutu bilisa sibaase jabaakoo
Nagaan mana hiraarsa naaf bahi
Jabaa Namaa koloneel Gammachuu Ayyanaa fi
Kannen himananna isaanii jala jiran namonni 12 bilisa bahaniiru
1 / Kissii Qixxummaa
2 / Gammachuu Ayyaana
3 / Dr, fayyeeraa mokoonin
4 / fiqiiruu Dasee
5 / Inspeektar ungulaa Baaqalee
6 / Usman Hasaan
7 / Saj, Wadaajoo Malkaamuu
8 / Amaanu’el Injiiguu
9 / Biqiilaa Damee
10/ Lammeessa Takkalee
11/ Inspeektr Dornboos cuukoo
12/ Chariinat Tarrafee
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Dabalatee hidhamtootni Siyaasaa Oromoo 16 manni murtii Bilisaan lakkise.
Hidhamtoota Siyaasaa Oromoo mana Hidhaa Qilinxootti hidhamanii jiran Galmee namoota baayyiini isaanii 21 tahan guyyaa har’aa Caamsaa 17/2021 mana murtii Caffee Muudaatti dhiyyaatanii kan turan Yoo tahu hidhamtoota Siyaasaa 16 galmeen isaanii erga qoratee booda bilisaan akka bahan Yoo ajaju namoota shan shiraan akka himata isaanii of irraa ittisan ajajuus maddeen keenya oolmaa mana murtii Caffee Muusaa hordofaa turan nuuf himaniiru.
Hidhamtootni Siyaasaa kunneen waggaa 2019 kan hidhaman badii tokko malee shiraan Oromummaan yakka taheef waggaa lamaaf dararamaa kan turan Yoo tahu ammas namootni shan akka hin baane ajaja qaama tikaa irraa mana murtiitti himameen akka hidhamanii turan taasifamee jira.
Hidhamtootni Siyaasaa manni murtii Olaanaa federaalaa dhaddachi Caffee Muudaa bilsaan isaan baase Poolisii fi tikni ni lakkisa moo ni hidhee hanbisa akkuma hidhamtoota Siyaasaa biroo kan jedhus hordofnee ummataaf ni maxxansina.